Kuyo yonke inqubo ukuvela nokuthuthukiswa kwesintu zishintshile lizwe, labantu edolobheni, kodwa ngesimo amandla iyunithi, zenzelwe eminyaka, ogxilile futhi eminye asethuthukile. Enye yalezi amafomu kwaba absolutism. Le idivayisi amandla, lapho umbusi ophakeme kwadingeka kwaso, ngaphandle kokuvinjelwa yinoma ubani noma yini.
"Inkathi yokuchuma absolutism"
Key izici absolutism uvele ngaphambi kwesikhathi sethu esivamile futhi ihlolwe ku monarchies aseMpumalanga lasendulo. Kwakulapho, kunoma iyiphi amazwe, kwaba khona lomkhuba wokuthi wehlela emlandweni njengoba isimiso despotism asempumalanga. Ukuze izinhlangothi yakhe uzwakalise ukukhathazeka nokudelela ubuntu, zonke nezifiso aqondiswe ukuchuma isimo. Umbusi, ngubani uphokophele ezweni, ngokuvamile nonkulunkulu bezinto ezingabonakali futhi kwaba igunya okungahloliwe abantu abavamile. Nokho, amandla akhe ayebekelwe ngokuphelele ukuze ingcebo, isimo sezenhlalo ukuphila ungase ulahlekelwe akhona yini amalungu alo. Ngokuwa impucuko Asia ne-Afrika lasendulo, kukhona amandla angenamkhawulo eYurophu. Kukhona absolutism - isifiso ababusi ukwakha futhi ndawonye emazweni abo eqala khona, akazange adlale indima eqakathekileko, kodwa ngokuhamba kwesikhathi isidingo iphele. Noma kunjalo, amakhosi European ezazi zonke charm yokubusa autocratic, musa ugijimele ingxenye nalo. Ngakho-ke Ephakathi - lena ngempela "yokuchuma" ngoba absolutism.
Ekuqaleni ezikhathini zanamuhla ukuthuthukiswa imfundo nokubhala, abantu abaningi baqala ukuba uhlole overprotection phezu ingxenye isimo, absolutism zezombusazwe yayiya ngokuya ethandwa. Heads of State, bezama ukuba balondoloze amandla abo, wenza ezivuna, kodwa, eqinisweni, babe siyize futhi neze wanelisa futhi abantu abavamile noma isigaba abasafufusa abanikazi wobunxiwankulu. Uchungechunge ezidumile zamakhulu eminyaka wobunxiwankulu European revolyutsiy16-18 yaphela kokubusa okuphelele of absolutism umkhuba zezepolitiki emazweni aseYurophu. Nokho absolutism isencane kakhulu ukuya phambi esigabeni nezwe ezombangazwe.
metamorphoses ka absolutism
Absolutism - Kutama ukulawula konke ngaphandle kokuba nokwenzeka ukugxekwa - sezihlelelwe ekhulwini lama-20. Yiqiniso, usephumile lwamakhosi monarchical, kodwa kwathathelwa indawo akukho kancane, futhi amaphrojekthi mhlawumbe wokuvelela ngaphezulu absolutist. Ezivukayo uthi yobushiqela eJalimane neSoviet Union degree of lokuhlushwa amandla okungenamkhawulo Selilonke. Kobushiqela isibe uhlobo absolutism, lapho ifomula "bacabanga onjengami, noma uwena isitha" isebenza. Absolutism njengoba wezombusazwe osebenza manje kwanele ukhumbule Saudi Arabia. Lo mbuso, ogama nkosi akugcini ezenzweni zayo yinoma yimuphi isikhungo zezombusazwe , futhi noma yini afuna ukuyenza akuthandayo, lolu hlobo despotism Oriental ekhulwini lama-21.
Kafushane singasho ukuthi absolutism - ifomu zesikhashana wezombusazwe ukuthi, ukuze ubhekane imisebenzi yabo, unyamalele. Kodwa ezindaweni ezithile ke kuyabuya WAVUKA ekuqothulweni, like a phoenix, kuba nezikhathi zesikhashana emlandweni lapho kudingeka wokunxusa bonke abantu izinsiza yezwe esikhathini esifushane.
Karelova Galina Nikolaevna: Biography oxhumana
Zimbabwean uMugabe UZweli: izithombe umndeni
Abashisekeli - kuba ... Izimbangela, izimpawu, izinhlobo kanye definition bayeqisa. Izindlela yokulwa nokuvimbela Abashisekeli
Classic Soviet ahlekisayo ifilimu "Ivan Brovkin ku khona nsimu." Abalingisi, izindima, sakhiwo
Hairstyle Ketrin Pirs - emuva esikhathini esidlule
Inja yakho ukhwehlela ngoba uma ayiminyanisa? Siyazi ukuthi kumele wenzeni!
Amadokhumentari futhi sici amafilimu mayelana sasendulo, sathi: incazelo uhlu kanye nokubuyekeza